स्वस्थ रहन अपनाउनुहोस् यी तरिका – rastriyakhabar.com
रोग पालेर जिउन कति मुस्किल पर्छ भन्ने त दीर्घरोगीलाई बढी अनुभव हुन्छ । त्यसैले, स्वस्थ जीवनबारे वेलैमा सोचेको राम्रो । दैनिक गरिने स–साना गल्तीले रोगी भइन्छ । त्यसैले, नियमित एउटै तालिकामा जिउनु राम्रो हुन्छ ?
बिहानको खाना हल्का लिनु नै राम्रो हुन्छ । ‘रिभर्स डाइटिङ’ गर्ने, अर्थात् खानामा भात सकेसम्म कम खाने, तरकारीमा जोड दिने । कम भातले पेट अघाउँदैन भने तरकारी बढी खाने । सलादमा बल गर्दा अझै उत्तम हुन्छ । सलाद आफैँले काटेर खाने । आफूले काटेको अलि धेरै खाइन्छ ।
दिउँसो डाइटयुक्त हल्का–हल्का खाजा खाने । दिनमा दुई–तीनपटकसम्म खाँदा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ । दिनमा दुईचोटि मात्रै खाने नेपाली चलन छ । दुई–तीन घन्टाको अन्तरमा थोरै–थोरै खाइराख्नुपर्छ ।
दैनिक स्वास्थ्य डायरी मेन्टेन गर्ने । खाने तरिकाको तालिका बनाउने । कतिवेला खाने ? के खाने ? तालिकामै चल्ने । बिएमआई (बडी मास इन्डेक्स) क्याल्कुलेट गर्ने । इन्टरनेटबाट गर्न सकिन्छ । हाम्रो हाइट र वेट राखेपछि बिएमआई देखाउँछ । पुरुषको २४ भन्दा कम र महिलाको २१ भन्दा कम हुनुपर्छ । पुरुषको कम्मर ४० इन्च र महिलाको ३५ इन्चभन्दा बढी हुनु राम्रो होइन । पेट बढेपछि रोगहरू जन्मिन थाल्छन् ।
चक्रपथ सरसफाई महा-अभियानको ७१ औं हप्ता पुरा
थाइल्याण्डमा सिइआे लिडर अवार्ड २०१८ बाट ढकाल सम्मानित
निराधार झुटको खेती गरी चरित्र हत्या गर्ने प्रयत्न नगरौं ।
पौडी खेलाडी गौरिका अब ‘कान्छी’ रहिनन्
दमकमा आज अशोक दर्जीको घर हस्तान्तण कार्यक्रम हुदै
पोखरामा एसियाकै उत्कृष्ट १८ तले अपार्टमेन्ट बन्ने
काक्रोको सेवनले बुढ्यौलीपन रोक्न सक्छ !
खाना खानेबित्तिकै गर्नु हुन्न यी ८ काम
पासाङल्हामु राजमार्ग बन्द,नुवाकोट र रसुवाको यातायात ठप्प